ခင်မင်းဇော်: Why do I have to fight???
(ဘာကြောင့် တိုက်ဆိုတဲ့ ကဗျာက နော်မေဦးရေးတာလို့ ဆရာဂါမဏိက ပြောပါတယ်။)
မနှစ်တုန်းက ငါ့အဖေကို သူတို့သတ်ခဲ့
ပြီးတော့ ငါ့တဲကို မီးရှို့
ဘာ့ကြောင့် ငါ့ကိုမှ ဒီလိုလုပ်ရတာလဲ
မြို့ကြီးသားတွေကို မေးလဲ သူတို့လှည့်မကြည့်။
မသိဘူး ၊ကိုယ့်ဟာကိုယ် အေးအေးနေ တဲ့.....။
တနေ့ ငါမူလတန်းကျောင်းက အိမ်ပြန်အလာ
ဘာဖြစ်တာလဲ မေးလိုက်ဖို့ရာ တယောက်ယောက်များ သိလေမလား..
သွေးလွှမ်းတဲ့ အိမ်ခန်းကလွဲပြီး ဘယ်သူမှမတွေ့
ရွာလယ်လမ်းပေါ် ငါတယောက်တည်း လျှောက်ပြေး
ဘယ်သွားရမှန်းမသိပေမယ့် ဆရာမဆီ ခြေဦးလှည့်မိ
ငါ့အသိကို ရှင်းပေးနိုင်တာ သူတယောက်တည်းလို့ နားလည်ထား
သို့သော် ဒီတခါတော့ သူမတတ်နိုင်
ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆရာမရယ် ၊ ဘာဖြစ်လို့လဲ… ဘာ…ဘာဖြစ်လို့လဲ
ငါ့မှာ အဖေလဲမရှိတော့ အစ်မလဲ မရှိတော့။
ဆရာမပြောတော့ ငါ့ကို ကောင်းရာညွှန်လတ် အတတ်သင်စေမယ်ဆိုတာ ညာပြောတာလားဟင်။
ဒီတခါ မျက်ရည်တွေ ကျရင်း ဆရာမ ထပ်ပြော…
ကြီးလာအောင်သာ လုပ်စမ်းပါ သားရယ်၊
တို့အားလုံး အသက်ငင်နေကြတာ မတွေ့ဘူးလား၊ မင်းကြီးလာတာနဲ့ တခါတည်း ဒီဥစ္စာကို အင်နဲ့အားနဲ့ တားပစ်လိုက်၊ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ တို့အားလုံးခံနေရတာမို့...။
( အင်္ဂလိပ်ကဗျာမှ စာရေးဆရာ ဂါမဏိ ဘာသာပြန်ဆိုပါသည်၊)
တိတ်ဆိတ်မြေမှာ ဘယ်သူမှ မပြောနိုင်တာက
သတင်းပေးတွေကို နိုင်ငံ့သွေးနဲ့ တန်ဖိုးသင့်ပေး
ဒီတော့ မင်းဆိုးတို့မကြိုက်တာကို ဘယ်သူမှမပြောရဲ။
ဆိတ်ငြိမ်နေတဲ့ လူထုကြီးအတွင်းက တိတ်ဆိတ်ခြင်းအသံကိုတောင် ကြားနိုင်။
တိတ်ဆိတ်မြေမှာ ဘယ်သူမှ မပြောနိုင်တာက
တရုတ်က လမ်းရချင်။ ပြင်သစ်က ရေနံလိုချင်နဲ့
ယိုးဒယားက သစ်ယူ၊ န၀တက ခိုးရာပါပစ္စည်းယူနဲ့...။
အသတ်ခံရသူတွေရဲ့ တိတ်သွားတဲ့ အသံ
နောက်ပြီး အကြောက်တရားနဲ့ ပိတ်ဖုံးထားတဲ့အသံ
ဘယ်လိုပင် ဇွတ်အတင်းလုပ်လုပ်။ လွတ်လပ်မှုဆိုတဲ့အသံကို
လူလိမ်လူညာတို့ မတုပနိုင် မှိန်ပျောက်အောင် ဖုံးမပစ်နိုင်ပေါ့။
(In the Quiet land ကဗျာကို စာရေးဆရာဂါမဏိမှ ဘာသာပြန်ဆိုထားပါသည်)
တိတ်ဆိတ်မြေ ကဗျာကို သင်းအုပ်ဆရာ Wrightson Tongue ကရေးတယ်လို့ ဆရာဂါမဏိက စီဘောက်မှာ လာရေးထားပါတယ်)
ကောမန့်မှာ တယောက်က ဆရာဖေသက်နီ ဘာသာပြန်မကြိုက်ဘူး ပြောခဲ့လို့ ဆရာဂါမဏိ ဘာသာပြန်ကို ထပ်တင်ပေးထားပါတယ်။
Labels: ကဗျာ, အန်တီစုနှင့် သက်ဆိုင်သော
ဂါမဏိ: တိတ်ဆိတ်မြေ ကဗျာကို သင်းအုပ်ဆရာ Wrightson Tongue ရေးပြီး ဘာ့ကြောင့်တိုက် ကဗျာကို နော်မေဦး ရေးပါတယ်။
ဆရာဂါမဏိက စာရေးဆရာ အမှန်ကို လာပြင်ပေးသွားပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရေးတယ်ဆိုပြီး အင်တာနက်က တဆင့်ရတဲ့ ကဗျာထဲမှာ တချို့က မဟုတ်ဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။
Join US inacampaign to get rid of
that ethnic cleansing font that sis breaking our hearts.
ဒီကိစ္စက မူပိုင်ခွင့်တွေနဲ့ရော၊ သိက္ခာနဲ့ရော ဆိုင်တဲ့ ကိစ္စမို့ သေချာ ၀ိုင်းဝန်းမေးမြန်းကြဖို့ လိုမယ်ထင်ပါတယ်။ ဒေါ်စုက သူရေးတာပါလို့ မပြောထားပဲ ဒီကဗျာတွေကို ဒေါ်စုရေးတာပါဆိုပြီး အင်တာနက်မှာ ဖြန့်တာ၊ မူရင်းရေးသူတွေကို စော်ကားရာ ကျသလို အန်တီ့သိက္ခာကိုလဲ ထိခိုက်ပါတယ်။ နောက်ပြီး ကဗျာကို အန်တီရေးတာပါဆိုပြီး တင်ထားရသူတွေလဲ ကြားက မကောင်းပါဘူး။ ကျွန်မလဲ ကဗျာစာအုပ်တွေမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရေးတာပါဆိုပြီး ဖြန့်ထားပါတယ်။ အင်တာနက်မှာက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရေးထားတာလို့ ရေးထားကြတော့ အမှန်အမှား သိဖို့ အရမ်းခဲယဉ်းနေပါတယ်။
ကာယကံရှင် မနော်မေဦးနဲ့ သင်းအုပ်ဆရာတို့ကို သေချာမေးမြန်းပြီး အဖြေမှန် ဖော်ထုတ်လိုက်ရင် ကောင်းပါတယ်။ အခုရှုတ်မှ နောင်ရှင်း။ အမှန်တရားကို ဖော်ထုတ်ဖို့ ဘယ်အရာကမှ အတားအဆီး ဖြစ်မနေသင့်ဘူးလို့ မြင်ပါတယ်။ မနော်မေဦးနဲ့ သင်းအုပ်ဆရာ ရေးတာ သေချာပြီဆိုရင်လဲ ပြတ်ပြတ်သားသားပဲ မှားယွင်း ဖော်ပြထားတဲ့ အင်တာနက်ဆိုက်တွေကို အကြောင်းကြားသင့်ပါတယ်
အမလဲ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရေးသားတာ ဟုတ်မဟုတ် သိချင်ပါတယ်။ ခု ဆရာဂါမဏိဝင်ရှင်းထားသလို ကာယကံရှင်တွေနဲ့ နီးစပ်သူတွေ ရှိရင်လဲ အမြန်ဆုံး အမှားပြင်ဆင်ဖို့ အသိပေးကြစေချင်ပါတယ်။
မခင်မင်းဇော်ရော၊ ဆရာဂါမဏိရော ကျေးဇူးပါ။ အဲဒီ ကဗျာ ၂ ပုဒ်ကို ဘယ်သူရေးတယ် ဆိုတာ သေချာ အတည်ပြုပေး နိုင်မလား။ ကျွန်တော်လည်း ပီဒီအက်ဖ် ကဗျာစာအုပ်လေး လုပ်တဲ့ အထဲ အဲဒီ ၂ ပုဒ်ကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဆိုပြီး ထည့်ထားတယ်။ သေချာရင် ပြန်ပြင်ရအောင်။ နောက်ကြာရင် ပို အမှတ်မှား သွားကြမယ်။ နောက်တစ်ပုဒ် A Free Bird Toward A Free Burma ကရော။
(ကျွန်တော်ကတော့ ဖေသက်နီ ဘာသာပြန်တာလည်း ကြိုက်ပါတယ်။ သူက ကဗျာဆရာပဲ။)